ဘာသာရေးအမည်ခံပြီး ကျူးလွန်သော မကောင်းမှုများ အဆုံးတိုင်မည်လော — ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
kn37 စာ. ၁-၃
ဘာသာရေးအမည်ခံပြီး ကျူးလွန်သောမကောင်းမှုများ အဆုံးတိုင်မည်လော
ဘာသာရေးအမည်ခံပြီး ကျူးလွန်သော မကောင်းမှုများမှာ . . .
စစ်မှန်သောဘာသာသည် . . .
နိုင်ငံတော်သတင်း နံပါတ် ၃၇
▪ ဘာသာရေးအမည်ခံပြီး အဘယ်ကြောင့် မကောင်းမှုများ ကျူးလွန်ကြသနည်း။
▪ ယင်းသည် မည်သို့အဆုံးတိုင်မည်နည်း။
▪ သင့်အပေါ် မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။
ဘာသာရေးအမည်ခံပြီး အဘယ်ကြောင့် မကောင်းမှုများ ကျူးလွန်ကြသနည်း
ဘာသာရေးအမည်ခံပြီး အဘယ်ကြောင့် မကောင်းမှုများ ကျူးလွန်ကြသနည်း ဘာသာရေးအမည်ခံ၍ ကျူးလွန်နေကြသော ရာဇဝတ်မှုများကြောင့် သင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရသလော။ ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုပါသည်ဟုဆိုသူများ၏ စစ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အကျင့်ပျက်ပြားမှုတို့ကြောင့် သင်၏ တရားမျှတသောသိစိတ် နှောင့်ယှက်ခံရသလော။ ဘာသာရေးသည် ပြဿနာများစွာ၏ အရင်းခံဖြစ်ပုံရသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် ဘာသာတရားအားလုံးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ မကောင်းမှုကိုအားပေးသော ဘာသာတရားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူအများလေးစားသော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ယေရှုခရစ်က “မကောင်းသောအပင်သည် မကောင်းသောအသီးကို သီးတတ်” သကဲ့သို့ မကောင်းမှုကိုအားပေးသော ဘာသာတရားများသည် မကောင်းမှုတိုးပွားစေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ (မဿဲ ၇:၁၅–၁၇) အဆိုပါဘာသာတရားသည် အဘယ်အသီးများ သီးသနည်း။
▪ စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း– အေးရှားဝိခ်ဂျာနယ်အရ နိုင်ငံအချို့ရှိ ခေါင်းဆောင်များသည် “မိမိတို့လိုဘပြည့်ရန် လူတို့၏ ဘာသာရေးခံယူချက်များကို လိုသလိုကြိုးကိုင်နေကြသည်” ဟုဆို၏။ ရလဒ်အနေနှင့် “ကမ္ဘာကြီးသည် ကစဉ့်ကလျားဖြစ်တော့မည့် နိမိတ်ပြနေသည်” ဟုဂျာနယ်က သတိပေးထားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ထင်ရှားသော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ဤသို့ကြေညာ၏– “အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရပ်တန့်သွားအောင် သူတို့ကို သတ်ပစ်ရမယ်။” သူ၏ဖြေရှင်းနည်းကား အဘယ်နည်း။ “ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအမှီပြုပြီး သူတို့အားလုံးကို သတ်ပစ်လိုက်။” ယင်းနှင့်ခြားနားစွာ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆို၏– “တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက၊ ‘ငါသည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်၏’ ဟုဆိုလျက်ပင် မိမိညီအစ်ကိုကိုမုန်းလျှင် ထိုသူသည် မုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်၏။” (၁ ယောဟန် ၄:၂၀) ယေရှုက “သင်တို့၏ရန်သူတို့ကို ချစ်ကြလော့” ဟူ၍ပင် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (မဿဲ ၅:၄၄) စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်နေကြသော ဘာသာတရားများကို သင်သိသလော။
▪ မှားယွင်းသောအယူဝါဒများကို ပြန့် ပွားစေခြင်း– ဘာသာတရားများစွာက လူသေပြီးနောက် ဝိညာဉ်မသေဘဲ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည်ဟု သွန်သင်ကြ၏။ ဤသို့သွန်သင်သော ဘာသာများစွာက သေလွန်သူတို့၏ဝိညာဉ်များအတွက် ဆုတောင်းပေးရမည်ဟုဆိုကာ မိမိတို့ဘာသာဝင်များထံမှ ငွေညှစ်ယူကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကမူ ဤသို့သွန်သင်သည်။ “ပြစ်မှားသောဝိညာဉ်သည် အသက်သေရမည်။” (ယေဇကျေလ ၁၈:၄) “အသက်ရှင်သောသူသည် မိမိသေရမည်ကိုသိ၏။ သေသောသူမူကား အဘယ်အရာကိုမျှမသိ။” (ဒေ. ၉:၅) ယေရှုက သေလွန်သူများ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာမည်ဟု သွန်သင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ လူတို့တွင် မသေနိုင်သောဝိညာဉ်ရှိပါက ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း လိုအပ်တော့မည်မဟုတ်။ (ယောဟန် ၁၁:၁၁-၂၅) သင်၏ဘာသာတရားက ဝိညာဉ်မသေဟု သွန်သင်ပေးသလော။
▪ လိင်အကျင့်ပျက်ပြားမှုကို ခွင့်ပြုထားခြင်း– အနောက်နိုင်ငံများရှိ ချာ့ခ်ျများသည် လိင်တူမေထုန်ပြုသည့် ယောက်ျား၊ မိန်းမများကို ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာ၊ ဆရာမများအဖြစ် ခန့်အပ်ထားသည့်အပြင် လိင်တူအိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုပေးရန် တိုက်တွန်းကြသည်။ အကျင့်ပျက်ပြားမှုကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချသော ချာ့ခ်ျများတွင်ပင် ကလေးများအား လိင်ဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုကျင့်သည့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို သည်းခံခွင့်ပြုထားကြသည်။ သို့ရာတွင် သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့သွန်သင်ထားသနည်း။ ဤသို့ရှင်းရှင်းဖော်ပြ၏– “အလွဲမယူကြနှင့်။ မတရားသောမေထုန်၌မှီဝဲသောသူ၊ . . . သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူ၊ ယောက်ျားချင်းမေထုန်ကိုပြုသောသူ၊ ထိုအမှုကိုခံသောသူ . . . တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံရကြ။” (၁ ကောရိန္သု ၆:၉၊ ၁၀) လိင်အကျင့်ပျက်ပြားမှုကို အရေးမယူ ခွင့်ပြုထားသော ဘာသာတရားများကို သင်သိပါသလော။
မကောင်းသောအသီးကိုသီးသည့် ဘာသာတရားများအတွက် အဘယ်အနာဂတ်စောင့်ကြိုနေသနည်း။ ယေရှု ဤသို့သတိပေး၏– “ကောင်းသောအသီး မသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကို ခုတ်လှဲ၍ မီးထဲသို့ချလိုက်တတ်၏။” (မဿဲ ၇:၁၉) မှန်ပါသည်၊ မကောင်းမှုကိုအားပေးသော ဘာသာတရားများသည် အစတုံး ဖျက်ဆီးခံရပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သို့ဖြစ်ပျက်မည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ နောက်ဆုံးကျမ်းစောင် အခန်းကြီး ၁၇၊ ၁၈ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပရောဖက်ပြုချက်က အဖြေပေးပါသည်။
မကောင်းမှုကိုအားပေးသော ဘာသာတရားများ မည်သို့အဆုံးတိုင်မည်နည်း
မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြောက်မက်ဖွယ်သားရဲတစ်ကောင်ပေါ်တွင် ပြည့်တန်ဆာမ ထိုင်နေသည်။ ၎င်းသားရဲတွင် ခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်းရှိ၏။ (ဗျာ. ၁၇:၁-၄) ပြည့်တန်ဆာမသည် မည်သူ့ကိုပုံဆောင်သနည်း။ သူသည် ‘လောကရှင်ဘုရင်တို့ကို’ ဩဇာလွှမ်းမိုး၏။ ခရမ်းရောင်အထည်ကို ဆင်မြန်း၍ အမွှေးနံ့သာများအသုံးပြုကာ အလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာ၏။ ထို့ပြင် “လူအမျိုးမျိုး” တို့သည် သူ၏ပြုစားခြင်းပရိယာယ်အားဖြင့် “လှည့်ဖြားခြင်းခံ” ရကြ၏။ (ဗျာ. ၁၇:၁၈; ၁၈:၁၂၊ ၁၃၊ ၂၃) ဤပြည့်တန်ဆာမသည် ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက နားလည်စေသည်။ သူသည် ဘာသာတရားတစ်ခုတည်းကိုမဟုတ်ဘဲ မကောင်းသောအသီး သီးသည့် ဘာသာတရားအားလုံးကို ပုံဆောင်သည်။
ပြည့်တန်ဆာမ စီးသောသားရဲသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကို ပုံဆောင်သည်။* (ဗျာ. ၁၇:၁၀-၁၃) မကောင်းမှုကိုအားပေးသော ဘာသာတရားများသည် ဤနိုင်ငံရေးသားရဲအပေါ် ခွစီးထား၍ ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ဦးတည်ချက်များကို လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်ရန် အားထုတ်၏။
သို့ရာတွင် မကြာမီ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခု ဖြစ်ပျက်လာပါလိမ့်မည်။ “ယခုမြင်သော ချိုဆယ်ချောင်းနှင့်သားရဲသည် ပြည့်တန်ဆာကိုမုန်း၍ သူ၏စည်းစိမ်ကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ သူ၏အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်၍ သူ၏အသားကိုကိုက်စားလိမ့်မည်။ သူ၏ကိုယ်ကိုလည်း မီးရှို့လိမ့်မည်။” (ဗျာ. ၁၇:၁၆၊ ၁၇) ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများသည် အဆိုပါဘာသာတရားများကို ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်၍ အစတုံးဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။ အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပါတကား။ ယင်းကို မည်သည့်အရာက လှုံ့ဆော်ပေးမည်နည်း။ နောက်ဆုံးကျမ်းစောင်က ဤသို့အဖြေပေး၏– ‘ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏အလိုတော်ကိုပြုခြင်းငှာ . . . သူတို့၌ အကြံပေးတော်မူ၏။’ (ဗျာ. ၁၇:၁၇) အဆိုပါဘာသာတရားများသည် ဘုရားသခင့်နာမတော်ကိုအမှီပြု၍ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာလုပ်ရပ်များ ကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့နှင့် ဘုရားသခင် စာရင်းရှင်းမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များကို အသုံးပြုကာ တရားမျှတစွာ စီရင်တော်မူမည်။
ဤဘာသာရေးပြည့်တန်ဆာ၏ ကြမ္မာဆိုးမှ သင်လွတ်မြောက်လိုပါက အဘယ်အရာပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ‘ငါ၏လူမျိုးတို့၊ သူ၏အထဲကထွက်ကြလော့’ ဟုဘုရားသခင့်ကောင်းကင်တမန်က တိုက်တွန်း၏။ (ဗျာ. ၁၈:၄) ယခုအချိန်သည် အဆိုပါဘာသာတရားတို့မှ ထွက်ကြရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဘယ်နေရာသို့ သင်ထွက်ပြေးနိုင်သနည်း။ ဘာသာတရားမဲ့ဝါဒ၏ အနာဂတ်သည် မျှော်လင့်ချက်မရှိသောကြောင့် ယင်းနေရာသို့ ထွက်ပြေး၍မရပါ။ (၂ သက်သာလောနိတ် ၁:၆-၉) တစ်ခုတည်းသော ပြေးဝင်ခိုလှုံရာနေရာမှာ စစ်မှန်သောဘာသာတရားသာ ဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် စစ်မှန်သောဘာသာကို သင်မည်သို့ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သနည်း။
▪ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတင်ပြသည်– စစ်မှန်သောဝတ်ပြုသူများသည် “လောကနှင့်မဆက်ဆံ” ကြပါ။ လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲနေမည့်အစား “အချင်းချင်းချစ်” ကြသည်။ (ယောဟန် ၁၃:၃၅; ၁၇:၁၆; တမန်တော် ၁၀:၃၄၊ ၃၅) အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေမည့်အစား အချင်းချင်းအတွက် လိုလိုလားလား အသက်စွန့်ကြသည်။—၁ ယောဟန် ၃:၁၆။
▪ သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်သည်– စစ်မှန်သောဘာသာသည် “အဆက်ဆက်ခံသော နည်းဥပဒေသ” နှင့် “လူတို့စီရင်သောပညတ်တို့” ကိုသွန်သင်မည့်အစား သမ္မာကျမ်းစာအပေါ် အခြေခံသောအယူဝါဒများကို သွန်သင်သည်။ (မဿဲ ၁၅:၆-၉) အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ ‘ကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍ ဆုံးမခြင်း၊ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်း ကျေးဇူးများကိုပြုတတ်’ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။—၂ တိမောသေ ၃:၁၆၊ ၁၇။
▪ မိသားစုနှောင်ကြိုးများကို ခိုင်မြဲစေ၍ မြင့်မားသော ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို စွဲကိုင်စေသည်– လင်ယောက်ျားများ ‘မိမိကိုယ်ကိုချစ်သကဲ့သို့ ဇနီးသည်တို့ကိုချစ်ရန်၊’ ဇနီးသည်များ ‘မိမိတို့၏ ခင်ပွန်းကို အလွန်ရိုသေရန်၊’ ကလေးများ ‘မိဘစကားကို နားထောင်ရန်’ စစ်မှန်သောဘာသာက သွန်သင်ပေးသည်။ (ဧဖက် ၅:၂၈၊ ၃၃; ၆:၁) ထို့ပြင် အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခံရသူများတွင် စံနမူနာယူထိုက်သော ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများ ရှိရမည်။—၁ တိမောသေ ၃:၁-၁၀။
ဤစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော ဘာသာတရားရှိပါသလော။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ထုတ် မီးလောင်တိုက်သွင်းသည့် နိုင်ငံရေးစနစ် စာအုပ်က ဤသို့ဆို၏– “လူအများကသာ ယေဟောဝါသက်သေများဟောသည့်အတိုင်း၊ ကျင့်သည့်အတိုင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါက မီးလောင်တိုက်သွင်းမှုဖြစ်ခဲ့မည်မဟုတ်၊ ကမ္ဘာပေါ် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်မှု လုံးဝရှိတော့မည်မဟုတ်။”
ယေဟောဝါသက်သေများသည် နိုင်ငံပေါင်း ၂၃၅ နိုင်ငံတွင် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို ဟောပြောနေကြရုံမက သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုစံနှုန်းများအတိုင်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြသည်။ သင့်ထံမှ ဘုရားသခင်မျှော်လင့်ရာများကို ယေဟောဝါသက်သေများအကူအညီဖြင့် သင်ယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ သို့ပြုလျှင် သင်သည် ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်အညီ ကိုယ်တော်အား ဝတ်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုပင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါသည်။ အချိန်မဆွဲပါနှင့်။ မကောင်းမှုကိုအားပေးသော ဘာသာတရားများ၏အဆုံး နီးပြီ။—ဇေဖနိ ၂:၂၊ ၃။
ယေဟောဝါသက်သေများ ဟောပြောသော သမ္မာကျမ်းစာအခြေပြု သတင်းတရားအကြောင်း ပိုမိုသိလိုပါက အောက်ပါလိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
□ စောင့်နေကြလော့! ဘရိုရှာတစ်စောင်ကို မေတ္တာလက်ဆောင် ရရှိလိုပါသည်။
□ အခမဲ့အိမ်တွင်းကျမ်းစာသင်အံမှု ပြုလိုသည့်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကို ယေဟောဝါသက်သေများ ထုတ်ဝေသော ဗျာဒိတ်ကျမ်း—ယင်း၏မဟာအထွတ် အထိပ်နီးပြီ! စာအုပ်တွင်ရှု။
[စာမျက်နှာ ၃ ပါ အကျဉ်းဖော်ပြချက်]
မကောင်းမှုကိုအားပေးသော ဘာသာတရားများသည် ‘လောကရှင်ဘုရင်တို့ကို’ ဩဇာလွှမ်းမိုး
‘ငါ၏လူမျိုးတို့၊ သူ၏အထဲက ထွက်ကြလော့’